Iyo Android SDK haisisiri yemahara software | Kubva kuLinux
Iyo Android SDK haisisiri yemahara software
Zvinoita sekudaro Google achangobva kuchinja mazwi nemamiriro ekushandiswa kweiyo SDK de Android, icho chisiri chinhu chinopfuura iro teki rekushandisa iro maApplication ese eApple anoitwa, kunyangwe iyo inoshanda system pachayo.
Vatsva mazwi nemitemo yeiyo Android SDK ikozvino inosanganisira mitsara yakadai sekuti 'haungakwanise: (a) kuteedzera (kunze kwekuchengetedza zvikonzero), shandura, gadzirisa, kugovera, kuodza, kudzosera injinjini, kusanganisa kana kugadzira zvigadzirwa zve SDK kana chero chikamu che SDK ane mazwi asiri e-Mahara-software-ane hushamwari ", akanongedza nhengo yeFree Software Foundation Europe, Torsten Grote.
Izvi, hazvimborwadzi kujekesa, zvinotungamira mukukaka nerusununguko rune izvo zvinoenderana neFree Software Foundation, software inofanirwa kutarisirwa se "yemahara".
Neraki, Replicant, yemahara forogo yeApple, yazivisa kuburitswa kwe Kudzokorora SDK 4.0 Zvichienderana nezvazvino Android SDK masosi pasina mazwi matsva.
Nei paine shanduko? Nekuti izvozvi?
Kufanana nekurumbira kukuru uko Android kwave kuri kuwana, dambudziko rekuparadzaniswa papuratifomu rakamuka. Parizvino, vanomwe kubva pavashandisi gumi veAroid vane iyo Gingerbread vhezheni (7.x) yakaiswa pamidziyo yavo, iyo ichakurumidza kuve makore maviri.
Muna Kubvumbi 2012, vagadziri veApple vaireva ku "kupesana kunonyadzisa kwepuratifomu" nekunetsekana nekushungurudzika.
Izvo zviri pamusoro zvinotsanangurwa nekuda kwezvikonzero zvakati wandei, asi pane zviviri zvinomira pachena. Chimwe chazvo ndechekuti matemu mazhinji haana kukwana Hardware kuita nemazvo zvichangoburwa uye zvinorema Android mabasa uye mazhinji aripo maapplication. Chimwe chikonzero ndechekuti vagadziri vanoratidza kusava nehanya kana kusafarira mukupa kukwidziridzwa kune avo anodhura mamodheru kana munzira yekusiyana.
Nekudaro, kune imwezve fomu iri kuwedzera inoenderana yekuparadzaniswa. Ndokunge, vamwe vanogadzira vanotora iyo Android sosi kodhi sechigadziko uye voisimudzira neimwe nzira pane chiono cheGoogle neOver Handset Alliance. Muenzaniso wakanakisa weiyi Amazon's Kindle piritsi, kunze kweAlibaba's Aliyun modhi.
Google yakaratidza kusagutsikana nemamiriro ezvinhu aya uye, sekureva kwakasiyana siyana, ichangobva kupindira neAcer kuti iite kuti irege kugadzira modhi yakanangana naAyunun.
Mukupedzisa, uye kuita kuti zviomere vatambi vatsva kuteedzera zano reAmazon neAlibaba, kambani yakagadzirisa mamiriro ekushandisa kweiyo Android SDK (Software Developer Kit). Kubva ikozvino, chidimbu 3.4 chechibvumirano chitsva cherezinesi chinoreva kuti SDK haigone kushandiswa kunze kwekunge mushambadzi abvuma kusaita zviito zvingakonzera kupatsanurwa kweApple. Izvi zvinosanganisira kutora chikamu mukugadzira, kusimudzira, kana kugovera SDK zvinoenderana neiyo yepamutemo SDK.
Icho chitsva chirevo chinoreva kuti avo vanofarira kugadzira forogo nyowani ye Android 4.2 kana nyowani vanofanirwa kugadzira yavo yavo SDK, kubva pakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Iyo Android SDK haisisiri yemahara software
shackra sislock akadaro
"Ichokwadi kuti rusununguko rwunodiwa kuchengetedza mahara software mukugara uchikura uye kukura"
AIHWA. rusununguko rwemahara software rinofanirwa kuchengetedzwa kuitira kuremekedza munhu anoshandisa, kudzidza, kugovera uye kugadzirisa (chero achiziva kuzviita) software. Iyo software haisi magumo pachako, mwana wevanhu ndiye.
Pindura kune shackra sislock
Marcos Orellana akadaro
Ichokwadi kuti rusununguko rwunodiwa kuchengetedza yemahara software mukugara uchikura uye kukura, asi kana iriyo chete nzira yekuchengetedza imwechete uye yakagadzikana inodzorwa zvakanaka sisitimu, ndinoiona zvakanaka, kunyangwe ivo vaifanira kunge vakaedza imwe nzira vasati vatora izvi chiyero.
Pindura Marcos Orellana
Linux Kubva F akadaro
Zvakanaka nezvakaipa, rusununguko runodzikiswa zvishoma, asi hurongwa hwakabatana hunowanikwa
Pindura Linux Kure F
Android maapplication ekuvandudza
Pindura kune aarensmith
Ini ndinobvumirana na @shackra sislock
Zvikasadaro, iyo pfungwa yemahara software ingaite zvisina musoro.
Zvinoenderana nezvandakaverenga, zvinotsigira zvinotaurwa nechinyorwa chakapfuura kuti mazwi haana kuzombochinjwa (zvakaitika ndezvekuti pakurodha pasi sdk, ikozvino vanoratidza kuti EULA), uye kuti zvakare (sezvakataurwa naJarFil) hazvishande kune zvemahara zvinongedzo (sekutaura kwaPaul mune yekuvandudza), uye chinhu chinoshamisa kwazvo (uye zvinotaurwa mune zvakataurwa mutsamba) ndechekuti rezinesi iri rinofukidza mabhinari, asi kwete masosi anogadzira mabhainari (ayo ane Apache rezinesi ).
Pazasi mutsara kuti zviite zvipfupi: Dai Google isina kuratidza iyo EULA, isu tingadai tisina kuona.
Zvakare: Replicant yakagadzirwa pakati pegore ra2010 ichifunga chete zvekutsiva matoyi eimba neasununguko. Iye zvino inogona kuve iine mukurumbira, asi chete kune avo vari vateveri veLinux.
Chaizvoizvo ... izvo zvisiri pachena kwandiri ndezvekuti mabhinari angave sei "muridzi" uye nekodhi yekodhi yemahara ...?
Ini ndinotenda kuti iyo poindi yakataurwa nemwana ichiri kushanda. Kunyangwe yakaverengerwa kwenguva yakareba, chete izvozvi vanokumanikidza kuti ugamuchire mazwi ekuti utore SDK uye ndipo pakawanikwa nyaya. Chero zvazvingaitika, chinhu chakakosha hachisi chakanyanya kana chidzidzo chiri chitsva kana chekare asi mubvunzo wakaratidzwa mundima yekutanga. Kwandiri hazviite chero pfungwa kutaura kuti rezinesi rinofukidza mabhinari (seyakazara, kwete chete "zvivakwa zvezvinhu") uye nekune rimwe divi kutaura kuti kodhi yekodhi ine "mahara" uye mamwe "epamutemo" zvikamu.
Ndinovimba ndakanga ndachena.
William Cabrera akadaro
Panzvimbo iyoyo ndiri kumirira FirefoxOS
Pindura kuna William Cabrera
@William Cabrera Ini Zvakare!
Tsamba iya yakanyorwa nemutori wenhau. Hapana mushandi weGoogle akabuda kuzoramba nyaya idzi.
Kune rimwe divi, ndinokurudzira kuti uverenge ichi chimwe chinyorwa ( http://code.paulk.fr/article0008/what-s-up-with-the-android-sdk) umo mamwe e "akarambwa" mapoinzi muchinyorwa chaunotaura anopindurwa.
Ichi chinyorwa chinobuda kuzopesana nezvose
Diego Silberberg akadaro
Kana ichitadzisa rusununguko, hapana chakanaka ... chakanakirei sando kana chichigona kungoshandiswa neX mhando yezvipikiri?
Pindura Diego Silberberg
Icho chirevo hachisi chitsva, chave chichienda kubva pakutanga.
Zvakafanana neiyi imwe:
3.5 Kushandisa, kuberekesa nekuparadzira zvikamu zveSKK zvakapihwa marezinesi pasi peyakavhurika sosi software rezinesi zvinodzorwa chete nemitemo yeakavhurika sosi software rezinesi uye kwete ichi Chibvumirano cheRisense.
Chikamu chisina-chemahara chinoshanda chete kune zvishandiso zve SDK, kwete zvemahara zvinhu.
ngirozi adrian vera akadaro
hapana dambudziko, ndiri kumirira kuti Ubuntu isunungurwe saka ndinoiisa pane yangu smart
Pindura mutumwa adrian vera
Kun avocado akadaro
kunyangwe ini ndakamirira ubuntu kune mafoni
Pindura Avocado Kun
Hebheri Noe akadaro
Uye hapana anotarisira Debian 7 GNU / Linux kune avo nhare mbozha?
Pindura kuna Heber Noe
Simbisa nzvimbo yemufananidzo uchishandisa Gimp